Ny Sihanaka dia isan' ny vondrom-poko lehibe mandrafitra ny vahoaka malagasy, monina manodidina ny farihin' Alaotra, voafaritry ny renirano Bemarivo ambony sy Tampoketsa Atsimo ao avaratra, ny renirano Mahajamba ambony ao andrefana, ary ireo havoana misy ny Bezanozano sy ny ala ao atsinanana. Ny tanàna lehibe any dia Ambatondrazaka.
"Olon' ny heniheny" no dikan' ny anaran' izy ireo, noho ny fisian' ireo heniheny manodidina ny farihin' Alaotra izay onenany. Raha vary no vokatra lehibe indrindra teo amin' io faritra io, tamin’ny taonjato faha-17, dia lasa mpivarotra andevo sy entam-barotra hafa ny Sihanaka ka nanan-karena ihany koa, ary nanararaotra ny toerana nisy azy teo amin' ny lalam-barotra lehibe mampitohy ny renivohitry ny Fanjakan' Imerina mifanila aminy, Antananarivo, sy ny seranan-tsambon' i Toamasina any atsinanana. Tany am-piandohan' ny taonjato faha-19 dia teo ambany fahefan' ny Fanjakan' i Boina izy ireo talohan' ny nanekeny an' Imerina, izay nanjaka tamin' ny ankamaroan' ny faritra eto Madagasikara. Amin' izao fotoana izao, ny Sihanaka dia manao fambolena mafimafy kokoa ary bebe kokoa ny voka-bary any amin' io faritra io raha oharina amin' ny any an-toeran-kafa, ka miteraka fahasahiranana amin' ireo karazan-javamaniry sy biby tsy manam-paharoa izay miankina amin' ny tontolo iainana ao amin' ny farihy Alaotra.
Ny Sihanaka dia manana rafitra ara-tsôsialy mampitovy zo amin' ny ankapobeny, ka ny lahimatoa no loham-pianakaviana. Ny finoana nentim-paharazana no mibahan-toerana, na dia nisy fiantraikany aza ny kristianisma. Ny fiainam-piarahamonina eto, toy ny any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara, dia tarihin' ny foto-kevitry ny fanajana ny razana sy ny fady napetrak' izy ireo. Ny fanao ara-piarahamonina nentim-paharazana dia ahitana fombafomba fandevenana sy fisaraham-panambadiana saro-pady ary fandrarana mafy ny fiasana tanimbary amin' ny andro Talata.
1 Ny maha izy azy ny foko sihanaka
2.1 Ny fiavian' ny Sihanaka
2.2 Faha mpanjaka
2.3 Faha fanjanahan-tany
3 Fianakaviana sy fiaraha-monina
3.2.2 Ny kristianisma
4.4 Fombafomba fandevenana
Ny maha izy azy ny foko sihanaka[hanova | hanova ny fango]
Ny Sihanaka dia mivondrona manodidina ny tany feno honahona manodidina ny farihin' i Alaotra sy ny tanànan’ Ambatondrazaka any amin' ny faritra avaratra-atsinanan' ny afovoan-tanin' i Madagasikara. Ny anaran' izy ireo dia midika hoe "olon' ny heniheny", izay ilazana ampahany amin' ireo heniheny manodidina ny farihin' i Alaotra onenany. Amin' ny ankapobeny, ny teny hoe sihanaka izay ilazana koa ny honahona na heniheny dia fitambaran' ny teny hoe sia (mirenireny na very lalana) sy hanaka (miparitaka na miely), ary misy mpahay etnôlôjia sasany milaza fa io anarana io dia teraka tamin' ny vanim-potoana voalohany indrindra rehefa nifindra monina ny razamben' ny Sihanaka, izay nitady toeram-ponenana tsara kokoa ka nahita izany tany Alaotra.
Ny fiavian' ny Sihanaka[hanova | hanova ny fango]
Ny tantara am-bava dia manolotra fitantarana maromaro momba ny niandohan' ny Sihanaka. Ireo mpivarotra betsimisaraka angamba no voalohany tonga teny amin' ny faritra an-tanety manamorona ny reniranon' i Maningory. Ny fomba fijery iray hafa dia milaza fa ny fisian' ny hadivory fiarovana natao tamin' ny tany taloha dia manondro fa ny razamben' ny Merina dia mety nandalo teo amin' ny farihin' i Alaotra tamin' ny fifindra-monina avy any amin' ny morontsiraka atsimo-atsinanana mankany amin' ny faritra afovoany, ka namela mpifindra monina nitaranaka ny Sihanaka voalohany. Raha tsy izany, dia mety ho nisy andiana lehibe niantso ny tenany hoe Sihanaka nifindra monina avy any Imerina ho any amin' ny faritr' i Alaotra, izay mety ho efa nonenan' ny olona avy amin' ny foko maro samihafa, mba hitazomana ny fahaleovantenany amin' ny fitondran' ny mpanjaka merina.
Farafaharatsiny, tany amin' ny tapak' ireo taona 1600 tany ho any, ny Sihanaka dia efa vahoaka nandroso ara-teknôlôjia sy nanan-karena, izay nanome andevo ho an' ireo mpivarotra andevo ho an' ny fambolena tao amin' ireo nosy Maskarena. Mba hiarovany ny tenany sy ny hareny dia matetika nohamafisiny amin' ny tamboho tany izay fahita koa any amin' ny Fanjakan' Imerina mifanila aminy ny tanànan' ny Sihanaka. Manodidina ny taona 1700 tany ho any, ny Sihanaka no mpiara-miombon' antoka lehibe amin' ny Betsimisaraka, izay nivarotany vary sy omby. Ny Betsimisaraka, izay naniry hahazo bebe kokoa amin' ny harenan' ny Sihanaka, dia nifampiraharaha tamin' ny fanampian' ny Frantsay mba hitondrana ny Sihanaka ho eo ambany fahefany. Nanao fanafihana maromaro tamin' ny Sihanaka ny milisy frantsay. Voasakana izany fanafihana izany tamin' ny alalan' ny fitambaran' ny fitaoam-piadiana - satria ny Sihanaka dia nahazo basy maro tamin' ny alalan' ny varotra nifanaovany amin' ny Sakalava any andrefana - ary ny fihanaky ny tazomoka sy ny aretina trôpikaly hafa izay namotika ny miaramila frantsay.
Tany amin' ny taonjato faha-18, ny Sihanaka dia teo ambany fifehezan' ny Fanjakan' i Boina. Nanao fanafihana lehibe iray fara fahakeliny izy ireo hanoherana an' i Boina mba hiverenan' ny fahaleovantenany, saingy tsy nahomby. Ny hamaroan' ny andevo nananan' ny Sihanaka dia nitarika fikomiana nisesisesy teo amin' ireo andevo tamin' ny taona 1768 ka nangataka fanampiana tamin' ny Eorôpeana izy ireo mba hamonoana izany. Manodidina ny taona 1800 tany ho any no resin' ny miaramilan' ny Fanjakan' Imerina teo ambany fitarihan' ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Izany dia nitarika ho amin'ny fidiran' ny voanjo merina izay nanorim-ponenana teo amin' ny Sihanaka ary nampiditra fomba amam-panao ara-kolontsaina, ara-toekarena ary ara-pôlitika tao amin' ny kolontsaina sihanaka ka hatramin' ny tapaky ny taonjato faha-19 dia "mitovitovy amin' ny faritany merina" ny tanin' ny Sikanaka. Tezitra tamin' izany fanerena izany ny Sihanaka ka nanao tsinontsinona ny mpitondra merina.
Niteraka fikomian' ny Menalamba nanoherana ny vahiny sy ny kristianisma ary ny fanjakazakan' ny Merina ny fahazoan' ny Frantsay ny Rovan' Antananarivo, lapan' ny mpanjaka merina, tamin' ny taona 1895. Tamin' ny vanim-potoana nisian' ny korontana tamin' ny taona 1895–1897, dia nanao bemidina nandroba omby sy entana hafa ny andiana Sakalava, Marofotsy ary jiolahy hafa. Voa mafy indrindra ny Sihanaka noho izy ireo nalaza ho mpivatotra manankarena. Maro tamin' ireo mponina sihanaka no natory tany anaty ala sy tany an-tsaha mba tsy ho tratran' ny fandrobana sy ny fandoroana tanàna amin' ny andro alina; may avokoa ny tanàna sihanaka.
Taorian' ny fanombohan' ny fanjanahan' ny Frantsay ny Nosy tamin' ny taona 1897, ny fitondrana mpanjanaka dia nampitondra enta-mavesatra (corvée) ny Sihanaka tamin' ireo taona 1910, ka nanery azy ireo amin' ny karama faran' izay kely na tsy misy, mba hanamboatra ny lalamby mampifandray ny seranan-tsambon' i Toamasina amin' Antananarivo, renivohitra.
Amin' izao fotoana izao, ny Sihanaka dia mamboly amin' ny tany manodidina ny farihy Alaotra ary mihamaro hatrany ny manondraka ny heniheny mba hanaovana fambolena amin' ny alalan' ny milina matanjaka. Io fahaverezan' ny toeram-ponenana io dia loza mitatao ho an' ireo karazam-biby monina ao amin' io faritra io, anisan' izany ny bandro (Hapalemur alaotrensis), izay hany karazana gidro eto amin' ny Nosy nivoatra mba hipetraka sy hihinana karazana zozoro (Cyperus madagascariensis) maniry manamorona an' ilay farihy.
Fianakaviana sy fiaraha-monina[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny taona 2013 dia notombanana ho 200 000 eo ho eo ny Sihanaka.
Ny fianakaviana dia misy ambaratongam-pahefana, miaraka amin' ny ray aman-dreny mifehy amim-pahefana ny zanany. Ny lehilahy sy ny vehivavy sihanaka dia manana fizakan-tena lehibe amin' ny fanapahan-kevitra hoe rahoviana no hanambady na hisaraka. Tsy azo atao ny fanambadiana eo amin' ny mpiray tampo, ny zanak' olo-mpiray tam-po, ary amin' ny havan' ny ray aman-dreny mivantana. Mba hanamafisana an' io firaisana voarara io, ny Sihanaka dia nampiasa teny manokana raha hiresaka amin' ireo mpianakavy manokana ireo. Matetika ny reny no iharan' ny fady maro, toy ny tsy mahazo mijery ny zaza maty, na mihinana zanak' omby, na mihinana karazana akondro iray, raha vao nianatra nanonona ny teny ilazana izany ny zanany. Ny ray aman-dreny dia tompon' andraikitra amin' ny fanabeazana ny zanany, ary ankehitriny raha mbola mianatra any an-tsekoly ireo izay afaka mianatra, ny ray aman-dreny sy ny fianakaviam-be dia miara-miombon' antoka amin' ny fanabeazana ny ankizy mba hanaraka fitsipika sy fanao ara-piarahamonina sy ara-kolontsaina. Ny zaza lahy dia foran' ny fianakaviany fara-fahakeliny amin' ny faha fito taonany.
Ao amin' ny Sihanaka, ny fokontany dia tarihin' ny zokiny indrindra, antsoina hoe tangalamena na zokiolona. Ny fifandraisana ara-tsôsialy dia tarihin' ny foto-kevitry ny fihavanana. Na dia tsy nanangana fanjakana voafehy ao amin' ny renivohiny tahaka ny Fanjakan' Imerina ao andrefany aza ny Sihanaka, dia niray saina manodidina ny finoany ara-pivavahana nentin-drazana.
Maanodidina ny fanajana andriamanitra mpamorona (Zanahary) sy ny razana ary ny fady ny finoan' ny Sihanaka, toy ny any amin’ ny faritra hafa eto Madagasikara. Anisan' ny fanompoam-pivavahana amin' ny razana eo anivon' ny Sihanaka ny joro (vavaka iaraha-manfataka ny fitahian' Andriamanitra na ny razana), ny fandevenana any amin' ny fasan' ny fianakaviana, ny famadihana, ny fanamasinana tsangambato sy ny tany masina ary ny toerana masina (doany sy tony ary jiro). Anisan' ny singa lehibe amin' izany fomban-drazana izany ny anjara asan' ny ambalavelona, ​​izay heverina fa fanahin' ny razana mihitsy. Ny fanao na fomban-drazana tsirairay dia misy fanahy manokana mifandray amin' izany, ary ny Sihanaka dia maneho fanajana ho an' ireo fanahy ireo amin' ny fitazonana ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana ary ny fanajana ny fady.
Itovian' ny Sihanaka amin' ny foko rehetra manerana ny Nosy ny finoana fa ny fanahin' ny razana dia afaka mipetraka amin' ny velona, ​​​​dia ny tromba. Ny Sihanaka dia mino fa ny fijerena ny vorondreo (atao hoe kirombo na treotreo koa (Leptosomus discolor)) dia mitarika tromba amin' ny tena. Manatona ombiasy ny mpiara-monina mba hahazoana torolalana ara-panahy sy hifandraisana amin' ny razana ary hamaritana hoe andro inona no tsara hanaovana asa na ezaka manokana. Tamin' ireo taona 1600 dia nitombo ny finoana ny sampy izay ninoana fa mampita ny hery ara-panahy miaro ireo andriamanitra miisa 11. Voalaza fa tany amin' ny faritra andrefana teo ambany fifehezan' ny Sakalava no niandohan' ireo ody ireo.
Ny fiovam-pon' ny tao amin' ny lapan' ny mpanjaka merina ho amin' ny kristianisma tamin' ny taona 1869 dia nanosika ny fahatongavan' ireo misiônera merina tany amin' ny tanin' ny Sihanaka sy ny fiovan' ny ampahany betsaka amin' ny mponina tany ho Kristiana. Taorian' ny nahazoan' ny Frantsay an' Antananarivo, renivohitry ny Merina, tamin' ny taona 1895, dia nilaozan' ny ankamaroan' ny Sihanaka ny kristianisma ka nahazo vahana indray ny fivavahan-drazana; fara fahakeliny, fiangonana manan-tantara lehibe iray tao amin' ilay faritra no nisy nandoro. Nisy misionera katôlika frantsay tonga tao amin’ io faritra io tamin' ny taona 1900 tany ho any ary nanomboka niova ho Katôlika tsikelikely ny mponina tao an-toerana. Tsy ela dia narahin' ny ezaka vaovao nataon' ireo misiônera prôtestanta izany, ka nitarika ho amin' ny fiovam-po bebe kokoa. Amin' izao fotoana izao, ny finoana nentim-paharazana dia mbola matanjaka eo amin' ny Sihanaka, na dia mihamaro aza ireo mpanaraka tanteraka ny kristianisma sy ireo mampifangaro an' izany amin' ny fanajana ny razana sy ny fitsipiny.
Ny mpitsidika eorôpeana tamin' ny taona 1667 dia nitatitra fa nipetraka tamin' ny tanàna mimanda ny Sihanaka, izay tena narovan' izy ireo tamin' ny tsipìka ary izy ireo no hany foko hitan' ny Eorôpeana fa manao tetezana. Ny trano dia natao tamin' ny akora voajanahary; Nino ny Sihanaka fa ny fanorenana trano amin' ny biriky na tanimanga dia mety hahatonga ny tsy fankasitrahan' ny razana. Ny andraikitry ny lahy sy ny vavy dia tafiditra ao anatin' ny fanamboarana sy fikojakojana ny trano: ny lehilahy manamboatra ny rafitry ny trano, ny tafon-trano, ny varavarankely, ny varavarana ary ny tohany, fa ny vehivavy kosa mandrary tsihy zozoro hatao rindrina sy gorodona ary tafo.
Ny vary no foto-tsakafon' ny Sihanaka, izay be dia be no amboleny. Ny sakafo mifototra amin' ny vary dia nolaohana amin' ny haza sy hena hafa, anisan' izany ny karazana gidro, ny lambo, ny bibilava, ny vorondolo, ny voalavo, ny saka ary ny voay, ary ireo farany ireo dia nisy fotoana niarovan' ny fady azy izay efa nilaozana. Ny fampiasana ny paraky sy ny rongony ary ny fihinanana henan-kisoa dia matetika voarara tao amin' ny fianakaviana sihanaka. Maro no nino fa mitondra oram-baratra ny fitaterana kisoa miampita ny farihin' Alaotra.
Ny fitafian' ny Sihanaha dia akanjo voatenona tamin' ny rofia. Ny moraingy, izay haiady nentim-paharazana, fanao indrindra fa teo amin' ny fiaraha-monin' ny Sakalava, dia fahita koa teo amin' ny Sihanaka.
Ny kolontsaina sihanaka dia nifikitra tamin' ny fady isan-karazany, ny sasany amin' izy ireo dia mbola hajain' ny fianakaviana mbola mitana ny nentin-drazana mandraka ankehitriny. Ny ankamaroan' ny fadin' ny Sikanaka dia noraiketin' ny mpahay tantara Van Gennep an-tsoratra tamin' ireo taona 1900. Ny fady tsy azo leferina sy toa hajain' ny Sihanaka rehetra dia ny fandrarana ny tsy hiasa tanimbary amin' ny andro Talata; manaja fady hafa mifandraika amin' ny andro manokana ao amin' ny herinandro koa ny zana-poko sihanaka sasany, toy ny tsy mivoaka ny trano na tsy manadio tsihy amin' ny andro sasany. Nasiana fady ny fihinanana vokatra vaovao na avy any ivelany, anisan' izany ny fanafody tandrefana. Fady iray hafa mahazatra ny tsy fahazoana mijery ny fiposahan' ny masoandro na ny filentehany, ny fibanjinana zavatra mena, na ny torimaso amin' ny filentehan' ny masoandro.
Niaro ny bibidia sasany tao amin' ny tanindrazan' ny Sihanaka ny fady. Ny haihay (Daubentonia madagascariensis) dia misy fady sy angano maro momba azy eo amin' ny Sihanaka. Ninoana araka ny lovantsofina fa mety hitondran' ny haihay ondana ny olona iray resin-tory any anaty ala. Raha natao amin' ny lohany ny ondana, dia hanan-karena ilay olona, fa raha ho amin' ny tongony kosa, dia hiharan' ny famosaviana ratsy izany olona izany. Toy izany koa, ny babakoto (Indri indri) dia heverina ho masina ary tsy azo hazaina, na vonoina na hanina.
Ny Sihanaka dia nino fa ny fahafatesana dia misy ifandraisany amin' ny areti-mifindra azo mifindra amin' ny fianakavian' ny maty. Hita taratra amin' ny fombafomba fandevenana nentim-paharazana izany finoana izany. Ny varavarana faharoa mankany amin' ny tranon' ny fianakaviana dia nampiasaina manokana amin' ny fitondrana ny maty. Alohan' ny hanaingana ny razana dia miakanjo lamba mena midorehitra ny mpitondratena maty vady ary mitafy ny firavany rehetra, avy eo mijery ny filaharana avy eo amin' ny sezany eo amin' ny fidirana lehibe mankany an-tranony. Entin' ny fokonolona any amin' ny trano fivorian' ny vehivavy ao an-tanàna ny razana, ary mitomany ny vehivavy ao amin' ny fianakaviana, ary mively amponga sy manao tonom-bavaka ny vehivavy hafa. Ao amin' ny trano mitokana (antsoina hoe tranolahy) no ipetrahan' ny lehilahy, ka nanaovan' izy ireo fanasambe ihinanan-kena sy toaka, izay anaterana tsindraindray ho an' ireo vehivavy misaona. Indraindray dia misy lehilahy iray voafantina mandeha manodidina ny trano ary manao hiram-paty, ka ireo vehivavy ao anaty trano amin' izany dia mandray anjara koa amin' ny alalan' ny antso sy famaliana. Aorian' ny fanasana, ny lehiben' ny fiarahamonina dia manatsoboka ny rantsan-tanany amin' ny tavin-kena miempo ary mikasika ireo izay nanampy tamin' ny fandevenana, mba hiarovana azy ireo amin' ny aretina sy ny fanarahan' ny fanahy ratsy.
Ny fianakavian' ny maty indray avy eo no mivory ao amin' ny tranon' ny fianakaviana izay isotroany toaka bebe kokoa sy anaovana fombafomba fanadiovana (atao hoer faly ranom-bohangy). Ny ravim-boasarimakirana sy zavamaniry roa hafa dia alona ao anaty rano iray vilia baolina, ary ny iray amin' ny mpianakavy izay mbola velon-dray aman-dreniny no fidina hamafy izany amin' ny fananan' ny maty, mba hahafahana mizara sy ampiasaina indray izany. Mihidy mandritra ny valo andro ny varavarana namoahana ny faty, ka mandritra izany no mifady hanina ny fianakaviana. Rehefa tapitra io fe-potoana fifadian-kanina io, dia manao fombafomba fanadiovana (afana) ny fianakaviana ary vohana ny varavarana faharoa. Misy lanonana hafa atao hamaranana amin' ny fomba ôfisialy ny fotoana fanadiovana ny fiarahamonina. Avela ho rava hoazy amin' izay ny tranon' ny maty.
Miverina ao an-tranon' ilay mpitondratena ny mponina avy eo, manala ny lamba sy ny firavaka, nanala ny randrana amin' ny volony (mariky ny fisaonana), mampiakanjo azy lamba tonta, miteny azy tsy nihinana afa-tsy amin' ny sotro sy vilia vaky nomena azy, ary manarona azy amin' ny tsihy tonta izay tsy azony esorina raha tsy amin' ny hariva. Tandrovany izany fombafombam-pisaonana izany mandritra ny valo volana, fara fahakeliny, ary mandritra izany fotoana izany dia tsy azony atao ny misasa na miresaka amin' ny olona mandritra ny antoandro. Aorian' io fe-potoana io dia afaka miala fisaonana izy ary heverina ho "nisara-panambadiana", izany hoe afaka manambady indray sy mamangy ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany, izay voarara teo aloha; raha mbola velona anefa ny ray aman-drenin' ny vadiny efa nodimandry, dia izy ireo ihany no afaka manambara fa nisara-panambadiana izy, ary tsy maintsy mijanona ho tsy manambady ary voarara tsy hitsidika fianakaviana raha tsy nomen' izy ireo azy izany sata izany. Io fanao amin' ny fanambaràna fisaraham-panambadiana io, na dia tsy nisy fisaonana, dia ampiharina koa raha misy ny fisarahana amin' ny vady mbola velona.
Ny fiteny sihanaka dia iray amin' ireo endriky ny fiteny malagasy isam-paritra tetenina any amin' ny faritra misy ny Sihanaka.
Tamin' ny tapak' ireo taona 1600, ny Sihanaka dia efa nametraka ny tenany ho anisan' ny vondrona mpivarotra lehibe indrindra teto amin' ny Nosy. Ny toerana misy azy ireo izay eo amin' ny lalam-barotra lehibe manelanelana ny morontsiraka sy Antananarivo renivohitra no nahatonga azy ireo ho lasa mpiara-miombon' antoka lehibe tamin' ny varotra nanomboka tamin' ny taonjato faha-18; loharanom-bola lehibe ny varotra andevo mandra-pahatongan' ny fotoana nandrarana izany faha Radama I tamin' ireo taona 1810. Nanamboatra zavatra amin' ny tanimanga koa ny vehivavy sihanaka, izay nomasahina tamin' ny kitay nangonin’ ny lehilahy any amin' ny ala manodidina.
Hatramin' ny nifaranan' ny varotra andevo dia ny fambolena vary no tena niveloman' ny Sihanaka. Anisan' ny mpamokatra vary be indrindra eto amin' ny Nosy ny faritra misy azy ireo. Tsy mitovy ny fitsinjarana ny harena, ka ny mpanankarena no manana ny ankamaroan’ ny tany lonaka, izay ahofa amin' ny mahantra na ampiasainy azy ireo amin' ny karama kely.
Miompy omby sy mamintana na manarato trondro any amin' ny farihin' Alaotra koa ny Sihanaka. Ny asa fanjonoana dia voazara araka ny mahazatra ny lahy sy ny vavy: ny lehilahy dia tsy manjono afa-tsy amalona, fa ny vehivavy kosa dia mampiasa harato hahazoana trondro kely, ary ny ankizy ihany no mahazo manjono amin' ny haranjono. Avelan' ny lehilahy sy ny ankizy eny amoron-drano ny hazandranony mba horaisin' ny vehivavy sy ho entiny any an-tanàna.
Teo amin' ny tantaea dia ny Sihanaka no iray amin' ireo vondrom-poko malagasy vitsivitsy nanisy marika ny ombiny. Natao izany tamin' ny alalan' ny fandidiana ny sofin' ny omby ary hetsika ara-pivavahana natao indray mandeha isan-taona amin' ny andro voatondro hanaovana lanonana. An' ny fiarahamonina amin' ny ankapobeny ny omby ary ampiasaina indrindra amin' ny fambolena.
Adelaar, K Alexander; Himmelmann, Nikolaus (2005). The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. New York, NY: Routledge. ISBN 9781136755095.
Cipollone, Giulio (2008). Christianisme et droits de l'homme à Madagascar: un siècle d'évangélisation dans la région Alaotra-Mangoro. Paris: Karthala Editions. pp. 113–115. ISBN 978-2-8111-0041-4.
Ellis, Stephen; Rajaonah, Faranirina (1998). L'insurrection des menalamba: une révolte à Madagascar, 1895–1898. Paris: Karthala Editions. ISBN 978-2-86537-796-1.
Fremigacci, Jean (2014). Etat, économie et société coloniale à Madagascar: De la fin du XIXe siècle aux années 1940. Paris: Karthala Editions. ISBN 978-2-8111-0984-4.
Thompson, Virginia; Adloff, Richard (1965). The Malagasy Republic: Madagascar today. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0279-9.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sihanaka&oldid=1044157"
Voaova farany tamin'ny 24 Febroary 2022 amin'ny 05:57 ity pejy ity.